Vahaolana anaty rano - Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Ny famakafakana ny rano dia lasa mahazatra amin'ny famokarana akondro. Amin'ny toeram-pamokarana maro, ny mpitantana dia mandrefy karazan-kalitaon'ny rano isan-karazany toy ny maripanan'ny rano, ny sira ary ny oxygen, ny alkalinity, ny hamafiny, ny phosforus, ny azota amoniaka feno, ary ny nitrite. Ny fampitomboana ny fiheverana ny toe-javatra eo amin'ny rafi-kolontsaina dia famantarana ny fahafantarana bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny kalitaon'ny rano amin'ny fiompiana anaty rano ary ny faniriana hanatsara ny fitantanana.
Ny ankamaroan'ny fotodrafitrasa dia tsy manana laboratoara kalitaon'ny rano na olona efa zatra amin'ny fomba fandinihana rano hanaovana famakafakana. Fa kosa, mividy metatra sy kitapo famakafakana rano izy ireo, ary ilay olona nofidina hanao fanadihadiana dia manaraka ny torolàlana omena miaraka amin'ireo metatra sy kit.
Ny valin'ny fanadihadiana amin'ny rano dia tsy mahasoa ary mety hanimba ny fanapahan-kevitry ny fitantanana raha tsy marina.
Mba hanohanana tsara kokoa ny AquacULT, ny fitaovana BOQU dia namoaka mpanadihady maro an'isa an-tserasera izay afaka manandrana ireo masontsivana 10 amin'ny fotoana tena izy, ny mpampiasa koa dia afaka manamarina angona lavitra. Ankoatr'izay, rehefa tsy mahomby ny soatoavina sasany, dia hampandre anao amin'ny telefaona ara-potoana izy io.
5.1. Tetikasa fiompiana trondro anaty trano Maleziana
Ho an'ny masontsivana 9 sy sensor 3 pH ary sensor oksizenina 3 levona, ny sandan'ny mari-pana dia avy amin'ny sensor oxygen oxygen.
1) MPG-6099 dia natao manokana ho an'ny sensor na fitaovana isan-karazany miaraka amin'ny RS485 Modbus RTU.
2) manana datalogger izy io, manana interface USB koa misintona data.
3) ny data koa dia azon'ny GSM alefa amin'ny finday ary hanome anao APP izahay.
Modely No. Analyzer & Sensor
MPG-6099 Mpanadihady marindrano maro an-tserasera
BH-485-PH Sensora pH nomerika an-tserasera
DOG-209FYD Sensera DO optika nomerika an-tserasera
5.2. Tetikasa fambolena trondro any Nouvelle Zélande
Ity dia tetik'asa fiompiana trondro any Nouvelle-Zélande, ny mpanjifa dia mila manara-maso ny pH, ORP, ny fitondra-tena, ny masira, ny oksizena voafoaka, ny amoniaka (NH4). ary fanaraha-maso tsy misy tariby amin'ny finday.
DCSG-2099 Mpanadihady kalitaon'ny rano marolafy marindrano, ampiasao microcomputer puce tokana ho mpanodina, ny efijery dia efijery fikitika, miaraka amin'ny RS485 Modbus, interface USB ho an'ny angona fampidinana, mila mividy karatra SIM eo an-toerana fotsiny ny mpampiasa handefasana data.
Modely No. Analyzer
DCSG-2099 Mpanadihady marindrano maro an-tserasera